जनताले कि पूर्वराजाले बुझेनन्
राजावादीहरु राजतन्त्र पुनस्र्थापित गर्न सकिन्छ भनेर चम्किएका छन् । लोकतन्त्रका नेताहरु असफल हुँदै गएपछि उनीहरु चम्कनु स्वभाविक हो तर राजतन्त्रवादीहरुसँग देश र जनताका लागि गर्ने एजेण्डाहरु के के छन्, स्पष्ट भन्न कोही सक्दैनन् ।
माओवादीले १२ वर्ष जनयुद्ध गरेर सकेन र भारतलाई गुहारेर १२ बुँदेमा ल्याप्चे ठोकेर जनयुद्धमा सामेल भयो र मात्र राजाले छोड्नु परेको हो । त्यो पनि संसद पुनस्र्थापना गराएको हो, राजनीतिक बेइमानी भयो र राजतन्त्र नै निर्मूल पानै भारतले खेल्यो, राजनीतिक दलहरु हतियार बन्नपुगे । अन्यथा आज लोकतान्त्रिक राजतन्त्र हुनेथियो र जनता तथा देशप्रति घात गर्ने छुट कसैले पाउने थिएन ।
राजतन्त्र नभएकैले लोकतन्त्रको साइनबोर्ड झुण्ड्याएर मनपरीतन्त्र चलिरहेको छ । सुशासनका नाममा कुशासन चलाइरहेका छन् ।
पञ्चायतकालमा राजा नरहे देश रहन्न भनिन्थ्यो । देश भताभुङ् भए पनि छ, लोकतन्त्रले त्यसै भनिरहेको छ, लोकतन्त्र गए पनि देश रहन्छ । सवाल सुशासनको हो, देशप्रतिको दायित्व निर्वाहको हो, कसले गर्ने ती कर्म र देशभक्ति भन्ने हो । आज जो छन्, कुराले ठिक्क र कार्य निष्पट्ट । जो पनि अवसर पायो कि देशघात गर्ने र कमाउ धन्दामा लागिहाल्ने । राजनीतिक दलहरु छन्, सबै पसलजस्ता । सबै भ्रष्ट, कुनै पनि नेतामा राजनेतामा हुनुपर्ने एकगुण पनि छैन । सबका सब लुटाह र भ्रष्टाचारी, नैतिकहीन मात्र ।
चाहिएको छ जनताको जीवनस्तर उकास्ने खाका, योजना । मुलुक छ, मुलुकका सबै क्षेत्र तहसनहस भएका छन् । आन्तरिक राजनीति र अन्तर्राष्ट्रिय कूटनीति पनि भाँडिएको छ । नेपाल विदेशीहरुको खेल मैदान बनेको छ । विश्वास गरिएका संस्थाहरु नै भ्रष्टाचारमा चुर्लुम्म डुबेका छन् । यति हुँदा पनि राजतन्त्र चाहियो भन्ने जनता बृहद आन्दोलनमा जुट्न सकेका छैनन् । कारण के हो ? के हो भने जनतामा भ्रम छ, राजालाई पुनः देशको भार बोक्ने मन छ कि छैन, स्पष्ट देखिन्न । राजतन्त्र पुनःस्र्थापित भइहाल्यो भने मुलुक सुध्रिदै जान्छ भन्ने ज्ञान कसैलाई छैन । भरोसा कसैले दिलाएको देखिन्न ।
यस्ता विचारहरु यत्रतत्र पढ्न पाइन्छ । यो आमविचार हो । हुनसक्छ पूर्वराजामा पनि भ्रम होस् । अगाडि आउँदा जनता पछि सरिदिए के गर्ने ? जनता यिनै हुन्, जो मासुभात खाएर मतदान गर्छन् । गरीवीको लाभ चलाख नेताहरुले उठाइरहेका छन् । डा.बाबुराम भट्टराई, माधव नेपालहरुराजालाई जेल हाल्ने कुरा गर्छन्, प्रचण्ड नागार्जुनबाट पनि लखेट्ने कुरा गरिरहेकै छन्, स्वयं ओली फर्कने सपना नदेखे हुन्छ भन्छन् । तर आम नागरिक राजा आउ देश बचाउ भनेर नारा लगाइ नै रहेका छन् । राजाले विश्वास गर्ने जनतालाई हो, जनता जहिले जतासुकै पर्लक्कै पल्टिदिन सक्छन्, अनि अन्यौल जारी छ ।
आज हरेक नागरिक भन्छन्– यस्तो बेहाल बेथिति भन्दा त पञ्चायत नै ठिक थियो । जनताले पञ्चायत होइन, व्यवस्थित खोजेका हुन्, त्यो व्यवस्थितता दिने कसले ?
प्रधानमन्त्रीले नक्सा जारी गरे, भूमि ल्याउने कुरा गरिरहेका छन् । रामको बिबाद पनि उनैले छेडे । समस्या के हो भने ओली सरकारले अनियमितता रोक्न सकेन । अपराधलाई काँध थाप्यो । जनताप्रति जिम्मेवार हुन नसकेकै हो । यी दुर्गुणका कारण र भारतवादी नभएकाले उनको सरकार ढाल्न खोजेको पनि हो ।
नेपाली भूमि फिर्ता गफले आउन्न, नक्साले पनि आउन्न । आउने वार्ता र प्रमाणले हो । आफै भ्रष्टाचारको फोहर र पार्टी अविश्वासमा परेको सरकारलाई भारतले पनि किन विश्वास गरिरहन्छ र ? अहिलेको आवश्यकता अनियमितता रोकेर र अपराधीमाथि कारवाही गरेर नेपाली एकतासहितको बलले गर्ने वार्ता नै हो ।